O kwesiri Ka Ndị Igbo Kwàdo Buharị – Nnabụife
A kpọkuola ndị Igbo ka ha kwado onyeisi ala Buharị n'ịzọ ọchịchị nke ugboro abụọ n'ihi ọtụtụ uru nke ahụ ga-ewetara ha. Otu onye e ji okwu ya agba izu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, bụ Maazị Kenneth Nnabụife kwuru nke a ụbọchị Tuzdee ma sị na o nwere ike ṅkara ha njọ ma ọ bụrụ na ha emeghị nke ahụ.
Obianọ Eduola Ndị Kọmishọna na Ndị Ndụmọdụ Pụrụ Iche n'Ọrụ
Dịka oke mmeme iji guzobe ya n'ọkwa maka ịchị nke ugboro abụọ gachara, nakwa dịka ọ malitegoro ọrụ kpọmkwem; aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ eduola ndị ọrụ kọmishọna mmadụ iri na iteghete n'ọrụ, tinyere ndị ndụmọdụ pụrụ iche, dị iri na otu n'ọnụ ọgụ, bụ ndị ga-esoro ya wee rụọ ọrụ na agba nke abụọ a.
Onyeisi oche otu ndọrọ ndọrọ APC n'ala Naịjiria bụ maazị John Odigie-Oyegun ekwuola na na-agbanyeghị ihe iche aka mgba dị iche iche ọchịchị Muhammadụ Buharị na-agabiga, na ya bụ onyeisi ala gara n'ihu na-emezupute nkwa niile o kwere ụmụafọ Naịjiria, na-ekweghị ka ihe ma ọ bụ onye ọbụla kpasaa ya anya.